Qaabkee loo hirgelin doonaa mooshinka Jawaari, ma gacan taag mise cod qarsoodi ah? – Madal Furan
Hoy > Warka > Qaabkee loo hirgelin doonaa mooshinka Jawaari, ma gacan taag mise cod qarsoodi ah?
Muqdisho (Madal Furan) – Iyadoo ay gebi ahaanba istaagtay xal u raadintii khilaafka Baarlamaanka DFS u dhexeeyey taasoo ay gacmaha ka laabteen dhamaan Guddiyadii loo xilsaaray arrintaas, ayaa taladu iminka waxay saaran tahay miiska Madaxweynaha DFS Maxamed C/laahi Farmaajo.
Warar hoose oo ay heshay Madal Furan ayaa xaqiijinaya in caqabada ugu weyni ay ka dhalatay kadib markii la isku mari waayey nooca uu noqon doono hirgelinta mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari.
Xildhibaanada taageersan Guddoomiye Jawaarin ayaa ku adkeysanaya in mooshinku uu noqdo mid ay Xildhibaanadu codkooda ku dhiibtaan si qarsoodi ah balse Xildhibaanada ka soo horjeeda fikirkaas ayaa ku doodaya in Xeerka Baarlamaanku uu fasaxayo in gacan taag laga dhigo mooshinka laga keenay Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Saameynta Xukuumadda Raysal Wasaare Kheyre ku leedahay mooshinkan ayaa qudhoodu garab taagan in mooshin gacan ka taag ah lagu rido Guddoomiye Jawaari.
Mudane Jawaari oo maanta shir jaraa’id qabtay ayaa Culimada Diinta, Ururadda Bulshadda iyo shacbiga Soomaalida ugu baaqay inay la hadlaan Madaxweynaha ” Madaxweynuhu waa ilaaliyaha Dastuurka, dhexdhexaad ha ka noqdo waajibkiisa Dastuuriga, in la ilaaliyo xeer hoosaadka, si daahfurana looga shaqeeyo arrimahoo dhan” ayuu yiri.
Arrintu siday doonto ha ahaatee, xaaladda khilaafka Xildhibaanadda Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u muuqata mid samadda isku sii shareeraysa, isla markaasna ay soo xirmeen dhamaan albaabadii wada hadalka iyo waanwaanta.
SAWIRO:-Shirka arrimaha Soomaaliya oo ka furmay Brussels ee dalka Belgiumka
DAAWO:- “Isaaqistaan ayuu madaxweynuhu dhisay ee Somaliland ma dhisin” Siyaasiga abgaal ayaa sheegay